Gartic 2.2.11 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.2.11 လြန္ခဲ့ေသာ7မိနစ္က
ဂိမ္းမ်ား ဥာဏ္စမ္း Gartic
Gartic ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Gartic သူ၏ရည်မှန်းချက်အခြားကစားသမား drawing ဘာ hit ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အွန်လိုင်းဒီဇိုင်းအစုတခုဖြစ်ပါတယ်။ အခြားကစားသမားပုံဆွဲထိမှန်ရမယ်နေစဉ်အခန်းတစ်ခန်းနှုန်းအထိ 10 သင်တန်းသားများနှင့်အတူအသီးအသီးကိုပတ်လည်တဦးတည်း, ရေးဆွဲနေတဲ့စကားလုံးဆွဲခေါ်နေသည်။ ထက်ပိုမို 120 အထိရောက်ရှိခဲ့သည်ခံရပြီးနောက်အများဆုံးရမှတ်ရောက်ရှိသူကိုဝင်းတဦးတည်း။
သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှု (အထွေထွေ, ္တု, အစားအစာ, တိရစ္ဆာန်များ, verb ကြိယာ, ယောင်ဆောင်ကာတွန်းသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်) ၏ဆောင်ပုဒ်စကားလုံးရွေးချယ်ပြီးအခမဲ့ပျော်မွေ့!
သင်ကဖုန်းပေါ်မှာမှတ်ဉာဏ်မရှိခြင်းများအတွက် app ကိုဒေါင်းလုဒ်မဆွဲနိုင်သလဲ https://gartic.net: Gartic PWA ကိုသုံးပါ
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.gartic.Gartic: ကိုလည်း Gartic.io အတူတူ Gartic ပိုမြန်ပြီးပိုခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့သွားရောက်ကြည့်ရှု
Gartic အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Gartic အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Gartic အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Gartic အား အခ်က္ျပပါ
hbgappsbr စတိုး 10 20.58k
Gartic ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Gartic အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 2.2.11
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://gartic.com.br/privacy.php
Release date: 2019-08-17 15:28:28
လက်မှတ် SHA1: 3B:DD:6F:22:CB:9E:A0:73:CD:47:83:B6:80:32:19:55:35:44:A0:60
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Henrique Almeida
အဖွဲ့အစည်း (O): Gartic
နယ်မြေ (L): Belo Horizonte
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Minas Gerais
Gartic APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ